Dating ndechimwe chezvinhu izvo anenge munhu wose anosvika pamwe zvichida vamwe pfungwa kutya pane imwe nguva kana kuti imwe. Shure kwezvose, mukubata ukama ndiko yakaoma uye dzimwe nguva zviri anenge zvisingaiti kufunga chii kuti mumwe munhu ari kutsvaga. Vanhu vanozviwana kutamburira muukama vanowanzonzwa kuti kuitika zvakawanda misi achavapa zvakawanda zvokusarudza, chete kuti vanozviwana nenhau kunyanya kwakatooma nhau somugumisiro avo dzikawanda kuedza.
Pane zvikonzero zvakawanda kuti zvadai, kubvira ane nekusagona ukurukure chokuti vanhu dzimwe nguva vanoda zvinhu zvakasiyana zvachose ukama hwavo. Chinofadza ndechokuti hazvirevi hazvo kuva ichi chakaoma.
Imwe nzira kutora kutya nekuvhundukwa kubva kudanana kuchengeta zvose akasununguka pakutanga. Hapana chikonzero kutya kana anotyisa pamusoro zuva rokutanga nokuti chaizvo kuti, musi wokutanga. Hapana chikonzero ikoko kuva zuva rechipiri kana zvinhu havaendi zvakanaka. A zuva rokutanga kunofanira akatarira sezvo mukana kuva yakavhurika uye vakatendeseka kukurukura nemumwe munhu kuti uzive zvakawanda nezvemunhu iyeye uye akavapindurawo, kubvumira kuti munhu kuwana zvakawanda pamusoro pako.
Chinhu bedzi sokuti vanhu kusimbisa zvakawanda pamusoro pane kuenda musi wokutanga kwava kuti kutanga musi. Vamwe vanhu vanoita sokuti havana dambudziko chero kuwana zuva pashure zuva. Vamwe vanoona kwazvo zvakaoma. Muzviitiko zvakadai izvi kungava kunobetsera kushandisa kufambidzana Website kana kubatanidzwa zviitiko kuti azoda kubatsira vanhu kuwana musi. Vamwe vanhu havasi hazvo achinyatsoita misi dzave vanotova prearranged uye kuwana rakasiyana nzira nechokwadi kuti achawana musi ari kupfuura chinyakare fashoni. Zvitende kana kwete, mumwe mukuru nzvimbo kuti akabvunza panze musi uri imbwa Park.
Pane chimwe chinhu pamusoro pakuva imbwa kuti runyoro chando. Zviri nyore kutaura kuti munhu anenge hwechipfuwo kupfuura kutaura zvimwe zvinhu. It unokupa mukana kutaura chimwe chinhu kuti munhu kana iwe zvichida haana kumbotaura chinhu kudai imwe ezvinhu. Apo zvinhu zvose vanoonekwa, Hazvishamisi kuti imbwa paki iri nevakawanda nzvimbo yakadaro kuti kutorwa mwoyo nomumwe. Rinopa iwe chinhu kutaura uye unoziva kana imi muri kubvunzwa pamusoro musi munhu kuti ane dzinovaraidza yavo imomo kuti vaviri uchitova chinhu mumwechete zvakafanana.
Nyaya iripo ndeyokuti manyorero ako zvokufambidzana pakupedzisira rakasunga kuti unhu hwako uye nzira ukasarudza kugadzirisa zvinhu zvavo. Izvi zvichakubatsira kusarudza sei kuwana musi wokutanga. Kamwe wasvikapo, chinonyanya kukosha kuyeuka ndechokuti kuchengeta kukurukura chiedza uye kubvumira kuti kutora kwose kuti uzvitore iwe. Nekuti kuti wakarurama ave munhu akakukodzera pakupera.